ကျောက်စိမ်းအရိုင်းထည် အခွန်လျော့ရန်လို အပါအဝင် သိသင့်တဲ့ သတင်းများ
ကျောက်စိမ်းအရိုင်းထည် အခွန်လျော့ရန်လို အပါအဝင် သိသ...
9 ก.ย. 2562 - 12:05 น.
ညီနောင်မဟာမိတ်က တစ်လ၊ တစ်ဖက်သက်အပစ်ရပ်
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာ သြဂုတ်လက စတင်ပြီး တပ်မတော်နဲ့ ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေကြား သီတင်းနှစ်ပတ် နီးပါး တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်နေပြီးနောက်ပိုင်း စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ ညီနောင်မဟာမိတ် (၃)ဖွဲ့က တစ်လတာ တဖက်သက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲ လိုက်တယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းစစ်ပွဲရပ်တန့်ပြီး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေး လုပ်ငန်းများ၊ လက်တွေ့ကျကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ စက်တင်ဘာ (၉)ကနေ အောက်တိုဘာ (၈) ရက်နေ့အထိ တစ်လတာ အပစ်ခပ်ရပ်ဆိုင်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီလိုကြေညာထားတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ တပ် ကို မိမိတို့ကနေ လက်ဦးမှုယူပြီး ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှာ မဟုတ်ပေမယ့် တပ်ဖက်က မိမိတို့အား စတင်တိုက်ခိုက်ခြင်း ၊ မိမိတို့ဒေသတွင် စစ်တင်ရေးနှင့် စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ လာရောက်ပြုလုပ်ခြင်း၊ လက်နက်ကြီး အမြောက်အမြားဖြင့် စုပြုံပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခြင်း ၊ တိုက်လေယာဉ် ရဟတ်ယှာ်ုများဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေ လုပ်လာမည် ဆိုပါက မိမိကိုယ်မိမိ ခုခံကာကွယ်တဲ့ အနေအထားမျိုးနဲ့ တုံ့ပြန်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က ရှမ်းမြောက် အရပ်သားလုံခြုံရေးအတွက် စာထုတ်ပြန်
ကွတ်ခိုင်မြို့တိုက်ပွဲ အရပ်သား ၅ ဦး သေဆုံးမှု တပ်မတော်ကပြန်ရှင်း
ဖားကန့် ကျောက်တွင်း မြင်ကွင်း
လက်ရှိ အခွန်ကောက် ဥပဒေအရ ကျောက်စိမ်းအရိုင်းထည်တွေအပေါ် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း အခွန်ကောက်ခံနေတာကို ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ကောက်ခံဖို့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လဲ ဖြစ် အမျိုးသားလွှတ်တော် သတ္တုနဲ့ သယံဇာတ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်မြင့်က တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျောက်စိမ်း ထွက်ပေမယ့် အခွန်ကောက်များတဲ့အတွက် ကုန်သည်တွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရောင်းချပဲ နည်းမျိုးနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံဖက် သယ်ယူပြီး အခွန်သက်သာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံထဲ ရောင်းချနေတဲ့အတွက် တရုတ်မှာပဲ ကျောက်စိမ်းဈေးကွက်ကြီး ဖြစ်နေတာလို့လဲ သူက ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကျောက်စိမ်းဈေးကွက်ကို အကြောင်းပြုပြီး တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကွမ်ကျိုး ကြယ်ရာ ရွှေလီ အပါအဝင် မြို့ကြီး ၆မြို့နယ်တို့ဟာ ဖွံ့ဖြိုးသွားခဲ့ပေမယ့် ကျောက်စိမ်းထွက်တဲ့ ဖားကန့်ဒေသမှာတော့ ကတ္တရာလမ်း ကောင်းကောင်း မရှိသေးပဲ မကြာသေးခင်ကမှ လျှပ်စစ်မီး ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်စိမ်းကျောက်မျက်တွေအပေါ် အခွန်ကောက်ခံတဲ့နှုန်း မြင့်နေတဲ့အတွက် အချို့ကုန်သည်တွေဟာ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ ကျောက်မျက်ပြပွဲတွေမှာ မရောင်းချတော့တဲ့အတွက် တစ်ကြိမ်နဲ့ တစ်ကြိမ် ကျောက်မျက်ရောင်းချတဲ့ အတွဲတွေ လျော့နည်းလာနေတယ်လို့လဲ ကျောက်ကုန်သည်တစ်ချို့က ဆိုပါတယ်။
ဘဟားမားကျွန်းစု မုန်တိုင်းဝင်မှုအပေါ် အာဏာပိုင်တွေ ပျက်ကွက်
ဘဟားမားကျွန်းစုနိုင်ငံ အာဏာပိုင်တွေကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်တုန်းက ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း ဒိုရီယမ် ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုကို တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အစိုးရဟာ မုန်တိုင်းအလွန်မှာ အကူအညီပေးဖို့နဲ့ လုယက်မှုတွေကနေ ကာကွယ်ပေးဖို့ ပျက်ကွက်နေတယ်လို့ ဝေဖန်မှုတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံနေရပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ အင်အားပြင်းတိုင်ဖွန်း ဖားဆိုင်း ဝင်ရောက် တိုက်ခတ်သွားလို့ မြို့တော် တိုကျိုထဲနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အရပ်တွေမှာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။
မုန်တိုင်းကြောင့် လူတစ်သန်းနီးပါး လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်နေပြီး အများသုံးပို့ဆောင်ရေး စနစ်တွေလည်း ပိတ်ထားလိုက်ရပါတယ်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဖားဆိုင်းဟာ ၁၀နှစ်အတွင်းမှာ တိုကျိုမြို့ကို တိုက်ရိုက် ဝင်ရောက် တိုက်ခတ်သမျှ မုန်တိုင်းတွေထဲ အကြီးဆုံးမုန်တိုင်းလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ မုန်တိုင်းဟာ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲကို ပြန်လည်ရွှေ့လျားနေတာကြောင့် တိုကျိုမြို့ တောင်ပိုင်းမှာ ရုတ်တရက် ရေကြီးတာနဲ့ မြေပြိုနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေ ရှိနေပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကျောက်စိမ်းအရိုင်းထည် အခွန်လျော့ရန်လို အပါအဝင် သိသင့်တဲ့ သတင်းများ